Land for Sale in Thingangyun - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Lands for Sale in Thingangyun
သုဝဏၰVIP ေနရာေကာင္း လမ္းမတန္း ေထာင့္ျခံ ေျမကြက္ ေ...
Ad Number S-8423319
(60'x100')အကျယ်၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ သုမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ရန်နေရာကောင်း...
Ad Number S-8461641
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ သုဝဏ္ဏ VIP ( II )ရှိ မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိပါသည်
Ad Number S-8459765
သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဆေးရုံအနီး မြေကွက်အရောင်း
Ad Number S-8451910
🗺ေျမကြက္ေရာင္းမည္။🗺 Code - 99
Ad Number S-8451892
သင်္ဃန်းကျွန်း ဇောတိက(-)လမ်း နေရာကောင်း မြေကွက် ရောင်းမည်။
1,420 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8449592
မေခအိမ်ရာဝန်းအတွင်း လေးထောင့်ကန်လမ်းမကျော်ကပ် မြေကွက်ရောင်းမည်.
Ad Number S-8447167
(65'x80')အကျယ်၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ တောင်ထိပ်ပန်းလမ်းမပေါ်၊ မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-8446569
သင်္ဃကျွန်း သုဝဏ္ဏ VIP (2) ရှိ ဈေးတန် အိမ် နှင့် ခြံ အမြန်ရောင်းမည်။ (၆၀*၈၄) အကျယ် ဂရမ်မြေ...
Ad Number S-8444021
(50'x100')အကျယ်၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ရတနာလမ်းမပေါ်၊ နေရာကောင်း မြေကွက်အရောင်း
Ad Number S-8441007
သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမအနီး Junction ဇဝန ေဝဇယႏၱာလမ္းတို႔ႏွင့္အနီး 100'100'...
Ad Number S-8436002